Ryerson University - Fianarana any Kanada. Fampianarana an-tany hafa Magazine
Firenena : Kanada
fanafohezan-teny : Ryerson
Créé : 1948
mpianatra (eo ho eo.) : 40000
Aza adino ny miresaka momba Ryerson University
Misoratra anarana ao amin'ny Ryerson University
Ryerson University no Kanada ny mpitarika ao amin'ny zava-baovao, asa-mifantoka fanabeazana ary ny anjerimanontolo mazava tsara momba ny hetsika. Izy io dia miavaka tsara amin'ny tanàn-dehibe anjerimanontolo mifantoka amin'ny zava-baovao sy ny fandraharahana. Ryerson dia manana asa fitoriana mba hanompo mila fiaraha-monina sy ny ela-nitsangana fanoloran-tena ny anjara ny fiaraha-monina.
Notarihin'ny iray feno fahasahiana Academic Plan, iray fatra-paniry laza fikarohana fandaharam-potoana, ary ny Tompo mba hahavelom-bolo indray ny drafitr'asa sy ny manodidina ny fonenan'ny mpianatra manodidina, Ryerson no tena ampiharina-ny oniversite any Ontario momba ny misy sehatra, ary ny lazany miaraka amin'ny mpandraharaha sy ny fiaraha-monina mpitarika mbola hitsangana.
Ryerson manome mihoatra noho 100 undergraduate sy ny diplaoma fandaharana. Kolontsaina isan-karazany sy ny manavaka, ny anjerimanontolo no an-trano ho 38,950 mpianatra, ao anatin'izany ny 2,300 tompony sy ny PhD mpianatra, efa ho 2,700 sampam-pianarana sy ny mpiasa, ary mihoatra noho 170,000 Alumni maneran-tany. Fikarohana ao amin'ny Ryerson dia amin'ny leha ny fahombiazana sy ny fivoarana: ivelany vatsian'ny fikarohana Nitombo avo roa heny tao anatin'ny efa-taona. The G. Raymond Chang Sekoly fianarana mitohy dia ny mpitarika any Kanada Mpanome ny oniversite-monina ny fanabeazana olon-dehibe. Ny oniversite ny mifantoka amin'ny zava-baovao sy ny fandraharahana no mifanitsy tena miavaka tsara ny Digital Media Zone, toerana ho an'ny mpianatra mba hiara-hiasa sy hitondra ny nomerika hevitra ho an-tsena.
Ryerson no reshaping ny afovoan-tanàna fototry ny Toronto telo trano vaovao: ny Mattamy Athletic Centre amin'ny Gardens, ny Ryerson Sary Centre ao am-po ny oniversite, ary ny mpianatra ao amin'ny Centre fianarana Yonge Street. Ankoatry ny, amin'izao fotoana izao amin'ny fandrosoana dia ny fampandrosoana ny vaovao trano multipurpose, ny Fiangonana Street fampandrosoana (CSD). Io trano vaovao ho hita fotsiny avaratr'i Dundas amin'ny Fiangonana Street, ary ho an-trano ny efatra tolotra ara-pahasalamana fianarana fandaharana, Ry
Ted Rogers Sekolin'ny Management
Ny Ted Rogers Sekolin'ny Management (TRSM) ny raharaham-barotra dia sekoly deraina ny Association mba hampandrosoana Collegiate Schools ny Business(AACSB). Any amin'ny Bay Street akaikin'i Toronto ny distrika ara-bola, ny TRSM Manolotra fandaharana samihafa ao amin'ny raharaham-barotra isan-karazany fitsipika. Ny trano sekoly lehibe indrindra Kanada fitantanana undergraduate fandaharana, maro nahazo diplaoma niaraka tamin'ny fandaharana. Ny sekoly undergraduate Bachelor varotra (BComm) fandaharana dia mivondrona ho:
Ny Ted Rogers Sekolin'ny Management dia ekena mpitarika ao amin'ny fandraharahana ny fanabeazana any Kanada sy trano ny Ryerson University fandraharahana Program, iray amin'ireo fandaharana ny fandraharahana lehibe indrindra any Kanada.
Fianarana ahitana iray MBA amin'ny ifantohana manerantany, ary ny MBA tao amin'ny fitantanana ny Teknolojia sy ny Innovation. Ny sekoly ihany koa dia manolotra ny Tompon'ny Management Science (mScm-) ao amin'ny fitantanana ny Teknolojia sy ny Innovation.
Ny fanekena tahan'ny Ted Rogers Sekoly MBA Management ny fandaharana dia 25%, ny faharoa ambany indrindra amin'ny 39 Canadian MBA laharana ny ara-bola fandaharan'asa Post tamin'ny volana Martsa 2012.
ao amin'ny 2009-2010 pianarana taona, Nampiditra Ryerson majors vaovao roa ho any amin'ny Business Management fandaharana: lalàna & Business, Global Management sy Fampianarana. Ny Global Management Fianarana lehibe dia mpandimby ny Management lehibe, farany nanatitra in 2010-2011.
In latsaka 2013, Ted Rogers Sekoly Management nanomboka vaovao Sekoly Kaonty sy Finance. Accounting sy ny Fitantanam-bola irery ihany majors dia natolotra amin'ny alalan'ny Sekoly Kaonty sy vola ary tsy azo tratrarina amin'ny alalan'ny Business Management Program.
Ny raharaham-barotra teo aloha fandaharanasa mitoetra eo amin'ny toeram-pianarana ao amin'ny “Business Building”, trano vaovao nifindra tao aorian'ny $15 tapitrisa fanomezana avy amin'i Ted Rogers. Ny sekoly no misy ao anatin'ny vaovao elatry ny Toronto Center Eaton amin'ny zorony atsimo atsinanan'i Bay sy Dundas Streets. Ny sekoly mitana rihana telo ny sivy-tany elatra (rihana roa no nipetrahan'ny antsinjarany fampiasana, miaraka amin'ny etsy ambony kilasy fiantsonan'ny garazy ny sisa nipetraka telo storeys). Ny fampidirana ny Ryerson sampam-pianarana miaraka amin'ny fampiasana ara-barotra ao amin 'ny trano efa fiderana ho vahaolana ho an'ny zava-baovao ny afovoan-tanàna oniversite.
Ny sekoly nahazo laza-pirenena, rehefa iray ny mpampianatra (James Norrie) naniratsira ny niampatra ny Dragons’ Den nandritra ny fifanarahana farany sehatra iray mahomby dity amin'ny mpianatra ny sekoly. Ny fifanarahana farany nianjera tamin'ny alalan'ny noho ny mpampianatra ny zavatra. Toy izany koa tatỳ aoriana voarara mpampianatra avy amin'ny toeram-pianarana sy nitory ny oniversite.
Faculty ny Arts
Ny Faculty ny Arts ahitana humanities roa ambin'ny folo sy ny siansa ara-tsosialy sampan-draharaha (tahaka ny Fahalavoana 2016) ary milalao andraikitra tsy manam-paharoa lafiny roa eo amin'ny oniversite. Amin'ny sampam-pianarana tolotra:
nahazo diplaoma fandaharana, amin'ny roa ny tompony sy ny doctorat ambaratonga, izany, izay misy singa fototra mafy ny vatsim, fikarohana, zava-baovao sy ny fanadihadiana mitsikera;
high quality kanto miorina amin'ny fampianarana amin'ny alalan'ny fianarana taranja liberaly izay nanapaka rehetra manerana ny diplaoma Ryerson fandaharana fandaharam-pianarana, avy amin'ny fanaovan-gazety ny injeniera amin'ny raharaham-barotra. Liberaly fanadihadiana fanamby mpianatra’ saina aman-tsain'olombelona, nikarakara ny fahaizany mieritreritra manakiana sy zatra ny dian'ny fiovana haingana eto amin'ity izao tontolo izao.
Sampan-draharaha ao amin'ny sampam-pianarana ny Zavakanto
Zavakanto sy Contemporary Fianarana
tontolo iainana & Urban fampandrosoana maharitra
fiteny, Haisoratra, sy kolontsaina
Politika sy ny Public Administration
Faculty eo amin'ny fifandraisana & Design
Ny Faculty eo amin'ny fifandraisana & Design dia ahitana ny sekoly sivy, fanatitra undergraduate sy / na nahazo diplaoma diplaoma amin'ny fianarana lehibe.
Sekoly ao amin'ny sampam-pianarana ny Communication & Design
RTA Sekolin'ny Media
Sekolin'ny sary Arts
Sekoly ny Atitany Design
Sekoly ny Graphic Communications Management
Sekolin'ny Professional Serasera
Sekoly an'i Creative Industries
Nahazo diplaoma fanampiny fandaharam-pianarana misy amin'ny fanadihadiana haino aman-jery, fanaovan-gazety, famokarana haino aman-jery, sary fiarovana sy ny fitantanana ny famoriam-bola sy ny fifandraisana matihanina. Amin'ny sampam-pianarana trano koa ny Rogers Communications Center, izay manome zava-baovao sy ara-teknika tontolo iainana mba handalina sy fikarohana haino aman-jery isan-karazany sy ny lafiny fiaraha-monina.
Faculty ny Community Services
Ryerson ny Faculty ny Community Services multi-pifehezana dia manolotra fandaharana ao amin'ny fahasalamana, Mbola kely fampianarana, rariny ara-tsosialy sy ny fiaraha-monina fampandrosoana. Anisan'ny fandaharana Undergraduate:
Ankizy sy ny tanora Care
Mbola kely Studies
Ny asa sy ny Fahasalamam-bahoaka
Urban sy ny faritra Planning
Fandaharana nahazo diplaoma dia ahitana:
Amin'ny sampam-pianarana sy ny fiarovana ny fahasalamana incorporates fandaharana eo ambany Sekolin'ny ny asa sy ny Fahasalamam-bahoaka. Ny Sekolin'ny ny asa sy ny Fahasalamam-bahoaka (Couch) dia heverina ho mpitarika fanta-daza eo amin'ny fisorohana aretina fahasimbana sy fanabeazana. Ryerson University no hany sekoly izay fandaharana manome mari-pahaizana amin'ny asa sy ny fiarovana ny fahasalamana ao amin'ny faritanin'i Ontario. Taratasy fandaharana amin'ny fahasalamana sy ny fiarovana azo vita ny alalan 'ny Chang Sekoly fanabeazana mitohy.
Amin'ny sampam-pianarana ihany koa dia ahitana ny Midwifery Education Program (MEP), izay mankalaza ny faha-20 taona ao amin'ny 2013. Ny Ryerson MEP toerana dia ampahany lava indrindra-mandeha consortium ny karazany any Kanada (miaraka amin'ny rahavavy-toerana ao amin'ny University sy McMaster Laurentian University).
Araka ny marika Ryerson ny asa-mifantoka fampianarana, mpianatra mpiara-miombon'antoka amin'ny mpanoro hevitra isan-karazany, mpanara-maso, mpanao sy matihanina mba hahazoana antoka ny asa-traikefa manan-danja dia omena, ankoatry ny teorika toromarika matetika nanolotra toerana any an-dakilasy.
Ny University Tompon'ny maro ihany koa ny sekoly lehibe atao hoe fitaizana ny be antitra ao amin'ny 2008 for Daphne Cockwell, reny ny mpamatsy vola sy ny mpitsabo mpanampy Cockwell Jack, izay nanolo-tena hiasa amin'ny toSouth tranainy niverina avy any Afrika ny Ady Lehibe II.
Faculty of Engineering sy Architectural siansa
Ny Ryerson Faculty ny injeniera sy ny Architectural siansa (taloha Faculty ny injeniera, Architecture & Science) dia iray amin'ireo lehibe indrindra any Kanada injeniera fahaizanareo, maherin'ny 4,000 undergraduate mpianatra nisoratra anarana 9 licence diplaoma fandaharan'asa (19 rehefa anisan'izany ny safidy / specializations), ary ny 500 nahazo diplaoma ireo mpianatra ao amin'ny 15 tompony ary 5 diplaoma doctorat fandaharana. Aerospace Ryerson ny kajy amin'ny solosaina, Laboratory dia node ho an'ny Avo Performance kajy amin'ny solosaina, Virtual Laboratory ho an'ny Lehibe Toronto Area. Ny HPCVL dia interuniversity haingam-pandeha computation tambajotra izay miasa ho toy ny virtoaly supercomputer, manome ny hery ilaina computation mafy ao amin'ny vahaolana ny olana sarotra eo amin'ny injeniera sy ny fitsipika hafa.
Ny Faculty ny injeniera sy ny siansa Architectural manome Bachelor ny Architectural siansa sy ny injeniera Bachelor niandalana izy teo amin manaraka ireto fitsipika:
Aerospace injeniera : Ana Habakabaka Design Stream, Avionics Design Stream, Space Systems Design Stream
Architecture : Architecture safidy, Building Science safidy, Project Management safidy
Injeniera sivily : Environmental Stream, Ara-drafitra Engineering safidy, Fitaterana Stream
herinaratra injeniera : Energy Systems safidy, Microsystems safidy, Multimedia Systems safidy, Robotics sy Control Systems safidy
Taozava-baventy mekanika : Mechatronics safidy
Ny Faculty ny injeniera sy ny siansa Architectural diplaoma manolotra fandaharana ao amin'ny:
Ryerson University ny Department of Architectural siansa dia mitoetra ao amin'ny trano miorina amin'ny 325 Fiangonana Street natao ny malaza Canadian maritrano Ronald Thom(Ryersonian). Manolotra fandaharana amin'ny maritrano deraina ny Canadian Architectural Certification Board amin'ny ambaratonga roa ny licence (B.Arch.) ary ny tompony ambaratonga (M.Arch.).
Ny Center for computing sy Engineering nisokatra tamin'ny Septambra 2004 ary ny toetry-of-the-kanto siansa, teknolojia, toerana sy ny fikarohana naharitra efa ho iray tanàna manontolo andian-tsoratra tao afovoan-tanànan'i Toronto. Ny trano dia anarana ny George Vari Engineering sy computing Center tamin'ny Novambra 2005. Ryerson mpikaroka ao amin'ny injeniera sy ny siansa malaza fitsipika efa Nahazo ny Research Praiminisitra Excellence Awards (LOATRA), Kanada Research seza, NSERC Industrial Research Chair. Ny injeniera biomedical fandaharana nanomboka tamin'ny Ryerson in lavo 2008 no voalohany fandaharana toy izany any Kanada.
Tompon'ny maro, ny amin'ny sampam-pianarana Center for Urban Energy. CUE no mpiara-tohanan'ny Hydro One, Ontario Power Fahefana sy Toronto Hydro. Ny foibe dia mifantoka amin'ny angovo sy ny fikarohana an-drenivohitra angovo olana.
Faculty ny Science
tamin'ny Jona 29, 2011, ny oniversite dia nanambara fa ny University neken'ny Antenimieran-doholona ny Faculty of Science, ny sampam-pianarana vaovao ao amin'ny Ryerson University teo amin ' 40 taona. Ny Faculty of Science dia ahitana ny mpanorina efatra departemanta – Simia & Haiaina, Fizìka, Matematika, ary Computer Science.
Ryerson University ny Faculty ny siansa dia manolotra ny Bachelor ny Science (BSc) ambaratonga ao amin'ny sehatry ny matematika ampiharina, Haiaina, biomedical siansa, simia, informatika, Matematika ara-bola, ary mpitsabo Fizìka. Fianarana ahitana ny faritra ao amin'ny biomolecular, biomedical, kajy amin'ny solosaina, sy ny fampianarana matematika.
In 1852 amin'ny fototry ny ankehitriny Main Campus, ny manan-tantara St. James Square, Egerton Ryerson nanangana Ontario ny toerana fanofanana mpampianatra voalohany, ny Toronto Normal School. Mitoetra ihany koa ny Departemantan'ny Fampianarana sy ny Mozean'ny Tantaran'ny Zavaboary sy ny tsara Arts, izay nanjary ny Royal Ontario Museum. Ny fambolena laboratoara ao amin'ny habaka nahatonga ny tatỳ aoriana nanorenana ny Ontario Fambolena College sy ny theUniversity ny Guelph. St. James Square nandeha namaky hafa isan-karazany ny fanabeazana alohan'ny fampiasana ny trano fonenana ny namesake ny mpanorina ny tany am-boalohany.
Egerton Ryerson dia nitarika mpanabe, mpanao politika, ary Metodista fanompoam-pivavahana. Izy no fantatra ho ny rain'i Ontario ny rafi-sekolim-panjakana. Izy ihany koa ny mpanorina ny orinasa famoahana voalohany tany Kanada in 1829, Ny Boky Metodista sy ny Trano Famoaham-boky, izay anarana The Ryerson Press in 1919 ary ankehitriny dia ampahany amin'ny McGraw-Hill Ryerson, Canadian mpitory ny fampianarana sy matihanina boky, izay mbola mitondra ny anaran'i Egerton Ryerson noho ny Canadian hetsika.
Fandrosoan'ny siansa sy ny teknolojia isan-nitondra ny Ady Lehibe II, ary nitohy Canadian indostria, tapaka teo aloha ny theGreat fahakiviana, namorona fangatahana ho an'ny tena voaofana kokoa mponina. Howard Hillen Kerr nomena fanaraha-maso ny sivy Ontario Fampiofanana sy Re-fananganana foibe mba hanatanterahana izany. Ny fahitana ny zavatra hataony andrim-panjakana ireo dia mivelatra kokoa noho izay olon-kafa no nilaza. In 1943, dia nitsidika ny Massachusetts Institute of Technology (WITH) ary dia resy lahatra fa afaka hampitombo ny Kanada manokana MIT nandritra ny zato taona. Teny an-dalana, fikambanana toy izany dia afaka hamaly ny filàna amin'izao fotoana izao dia ny fiaraha-monina ny. Rehefa neken'ny Province tamin'ny farany ny hevitra ara-teknika Institiota, in 1946, dia nanolo-kevitra ny nahita maro. Hay na dia ny rehetra afa-tsy iray ho tanjona manokana ny sekoly, ny harena ankibon'ny tany toy ny sekoly. Ihany ny Toronto retraining foibe, izay nanjary ny Ryerson Sekoly Momba ny Teknolojia any 1948, ho lasa multi-fandaharana fonenan'ny mpianatra, Ny hoavy Kerr MIT any Kanada. Io fahitana Hita ao amin'ny Ryerson ny Teny filamatra sy ny fanambarana iraka.
The Toronto Fanofanana sy fametrahana Re-Institute noforonina tao 1945 eo amin'ny toerana teo aloha ny Toronto Normal School ao amin'ny St James Square, atsy amin'ny Gerrard, Fiangonana, Yonge sy Gould. Ny Gothic-Romanesque trano Noforonin'Andriamanitra ny mpanao mari-trano Thomas Ridout sy Frederick William Cumberland in 1852. Ny toerana dia nampiasaina ho toy ny Royal Air Canadian Forcetraining toerana nandritra ny Ady Lehibe II. Ny institiota dia mpiara barotra ny federaly sy ny governemantam-paritany mampiofana miaramila taloha sy vehivavy noho ny indray fidirana ho amin'ny fiainana olon-tsotra.
Ny Ryerson Sekoly Momba ny Teknolojia dia naorina tao 1948, handova ny mpiasa sy ny toerana ao amin'ny Toronto Fanofanana sy fametrahana Re-Institute. In 1966, dia tonga ny Ryerson Polytechnical Institute.
In 1971, -paritany lalàna dia ahitsy mba hamela Ryerson mba hanome anjerimanontolo diplaoma deraina amin'ny governemantam-paritany na ny lalàna sy ny Fikambanan'ny Anjerimanontolo sy oniversite any Kanada (aucc). Izany taona, koa lasa mpikambana ao amin'ny Filan-kevitry ny Ontario Anjerimanontolo (cou). In 1992, Ryerson lasa Toronto ny sekoly faharoa ny injeniera mba hahazo fankatoavana avy amin'ny fankatoavana Engineering Canadian Board (CEAB). Ny taona nanaraka (1993), Ryerson fomba ofisialy lasa University, amin'ny alalan'ny asa ao amin'ny mpanao lalàna Ontario.
In 1993, Ryerson nahazo fankatoavana mba hanome nahazo diplaoma koa diplaoma (tompony sy ny doctorates). Toy izany koa ny taona, ny Biraon'ny governora niova ny rafitra ny anarany Ryerson Politeknika University mba maneho ny matanjaka fanindriana ny fikarohana mifandray amin'ny fandaharana nahazo diplaoma sy ny fanitarana tsy ho fanatitra oniversite undergraduate diplaoma. Mpianatra nibodo ny fitantanan-draharaha ny oniversite biraon'ny tamin'ny Martsa 1997, fihetsiketsehana fiakaran'ny saram-pianarana fiakaran'ny.
Tamin'ny Jona 2001, Nihevitra ny sekoly amin'izao fotoana izao ny anarana toy ny Ryerson University. ankehitriny, Ryerson University dia manolotra fandaharana ao amin'ny aerospace, simika, sivily, mekanika, indostrialy, herinaratra, biomedical sy ny solosaina injeniera. Ny B.Eng biomedical injeniera fandaharana no voalohany fijoroana-irery undergraduate biomedical injeniera fandaharana any Kanada. Ny oniversite koa iray amin'ireo oniversite roa ihany Kanada mba hanolotra ny fandaharana amin'ny aerospace injeniera deraina ny Canadian Engineering fankatoavana Board (CEAB).
Ianao ve mila miresaka momba Ryerson University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Ryerson University ao amin'ny Map
Photos: Ryerson University ofisialy Facebook
Ryerson University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Ryerson University.
Other anjerimanontolo any Kanada